Dhaamsa Nugusa Boqachuuf Qophaayee -
bilisummaa December 21, 2016	Leave a comment
Bara wayii keessa biyya wayii keessatti nugusa waytu ture. Innis ummata isaa hacuucuun beekamaa ture. Yeroo bulchiinsa isaa ummanni isaa hedduu hedduu dararame; nugusichi cunqursaa ulfaafaa ummatatti fe’e. Ummannis hedduu itti fincilaa turan gabroomfataa kana. Innis yeroo dheeraaf ummata isaa bulchaa ture. Osoma akkanatti bulchuu gaafa tokko hedduu dhibama; du’uu akka hedus beekkate, hedduu qooqqifate hedduu caraanee sagalee du’aas dhageessise. Dhuma irratti waan balleesseef warwaatee aangoo irraa bu’ee nagaan boqachuuf fedhe!! Worwaate, watwaate, bacaraane, burjaajjaye, raataye!! Dhaamsas dhaamate!!!!!
1. Mucayyoon hangafaa seenaa odeessuu, seenaa fakkeessitee uumuu, seenaa kijibaa odeessuu fi kijiba hafarsuu jaalatti jallattuudha,dabduudha,oftuultuudha,dhiphoodha turte.
2. Mucaan itti aanu waa’ee walqixxummaa, walgargaarsa, jaalala, ogummaalee adda addaa kunuunsa, bulchiinsa gaggaarii irratti jaalala qaba gamna fayyaalessas ture.
3. Mucaan sadaffaa hiibboo jaalata ofii fayyaalummaa qaba ture.
4. Mucaan arfaffaas hiibboo jaalata ofii fayyaalummaa qaba ture.
Nugusichi dhibeen waan itti hammaatteef akka du’u hubate.Caraanee qooqqifates!! Innis aangoo eennuun akka dhaalchisu hedduu itti yaade. Innillee ijoollee ofii waamee dhimmi kana mari’achiise. Ijoolleenis aangoon anaaf mala jechuun hedduu wal morman. Nugusichis ijoollee aangoo irratti wal loltu tana addaan baasee aangoo kennuufii barbaade! Nugusichis du’a irratti dhaamachuun bulchiinsa isaa kan ulfaataa ture sanaaf ilma filachuu barbaade; ilmi isaa kun akka seenaa badaa isaa sirreessu barbaade!
Nugusichis ijoollee isaa arfan wal morkan kana waamee wal filadhaa jedheen. Ijoolleenis anatu filatama jechuun wal morman. Walii galtees dhaban. Achumaan nugusa biras deemanii atumti addaan baasii nuuf kenni jedhan. Innillee akkuma fedha keessanii gaaffii adda addaatin addaan isin baasuu jedheen. Ijoolleenis hayyee jetteen.
Ishee hangafaatin seenaa koo hanga ammaatti natti himi
Mucaa lammataatiin waa’ee walqixxummaa, walgargaarsaa, jaalalaa ogummaalee adda addaa bulchiinsaa natti himi
Previous DEEMEE MANA PIROFEESARII
Next THE HUMAN COST OF ETHIOPIA’S SWEEPING STATE OF EMERGENCY: “I NEVER WANTED TO SEE TOMORROW”